ary mahazo maintien des compétences (recyclage isan-taona) ny teknisianina rehetra miasa ao. Ny fomba fandraisana ny faminavinana ny mety ho toetry ny andro sy ny fampitana ny vaovao mifandraika amin’izay no mety tsy azon’ny olona tsara, hoy ny fanazavana avy any amin’ny meteo. Ny tsara indrindra dia ny manaraka ny fivoaran’ny faminavinana (Evolution des Prévisions), hoy hatrany ny fanazavana ary hahay handray ny vaovao. Vonona hatrany hanome fanazavana fanampiny izahay raha misy ny manjavozavo, hoy ny avy ao amin’ny Meteo Ampandrinomby. Nandray ohatra hanazavana ny zava-misy ny Meteo. Tamin'ny ririnina 2019 hoe hidina be ny maripana mety hanakaiky ny 0°C. Ny teto Antananarivo tonga dia nandray avokoa hoe ho Zero degré izany ny Maripana. Kanefa natao nazava tsara tao anaty fampitam-baovao fa any Ankaratra no hiheverana an’izay. Nanome tsiny ny Météo ny ankamaroan'ny olona satria tsy nahay nihaino vaovao na niova ny fandikana ny vaovao rehefa niampita.